Nexus9ရဲ့ problem ၈ ခုကို ကိုင်တွယ်ခြင်း ~ The ICT.com.mm Blog
Nexus9ရဲ့ problem ၈ ခုကို ကိုင်တွယ်ခြင်း
HTC က ထုတ်ထားတဲ့ Nexus9ကတော့ လူတစ်ကာလိုချင်နေတဲ့ quality ကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတဲ့ tablet တစ်လုံးဖြစ်တဲ့အပြင်ကို သူ့ရဲ့ပုံစံက စွဲဆောင်မှုရှိခြင်း၊ ပါဝါကြာရှည်စွာ သုံးခံနိုင်ခြင်းနဲ့ Android ဆော့ဝဲလ်ပိုင်း မှာဆိုရင်လည်း အကောင်းဆုံး အမှားခံနိုင်ရည်စွမ်းရှိတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားပါတယ်။ HTC က နာမည်ကြီးသလောက် Nexus က လိုက်ပြီး နာမည်ကြီးကောင်း ကြီးနိုင်ပေမယ့် စျေးကွက်မှာတော့ အလွန်အရောင်းသွက်နေတဲ့ ပစ္စည်းတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကနေ့မှာတော့ Nexus9ကို အသုံးပြုသူတွေကြားမှာ အကြုံတွေ့ရဆုံး error တွေကို ထောက်ပြသွားမှာဖြစ်ပြီး အဲဒိပြဿနာတွေကို လတ်တလော ဘယ်လိုရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာကို တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Nexus9အသုံးပြုသူတွေအကုန်လုံး ဒီပြဿနာတွေကို ကြုံတွေ့မှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ကြုံတွေ့သူတွေ အတွက်ကို ရည်ရွယ်ပြီး ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
နံပါတ် ၁ ပြဿနာ – အားသွင်းမှုအချိန်ရှည်ကြာခြင်း
Tablet ရဲ့ ဘက်ထရီနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ ပြဿနာတက်ပြီး ကွန်ပလိန်းတက်တဲ့လူ သိပ်ပြီးတော့ မရှိပေမယ့် အားပြန်သွင်းတဲ့အခါမှာ အချိန်အတော်ကြာတယ် ဆိုတာကိုတော့ အသုံးပြုသူအများစုက ကွန်ပလိန်း တက်ကြပါတယ်။
ပါဝါအားသွင်းတဲ့ ကေဘယ်ကြိုးကို သေချာစွာခိုင်မြဲအောင် တပ်ပြီး ကိုယ်အားသွင်းတဲ့ charger ကို ချိတ်ဆက်မှု ရှိမရှိသေချာစွာ ကြည့်ရပါမယ်။
အားသွင်းတဲ့အခါမှာ အသင့်ပါပြီးသား ကေဘယ်ကြိုးနဲ့ပဲ အားသွင်းသင့်ပြီး၊ တစ်ခြား ပစ္စည်းတွေနဲ့ အားသွင်းခြင်းဟာ ဗို့လ်အား မတူညီတဲ့အတွက် အားသွင်းမှုကြာရှည်နိုင်သလို tablet အတွက်လည်း ပျက်လွယ်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်အားသွင်းတဲ့ ကေဘယ်ကြိုးထည့်ထားတဲ့ ပါဝါအရင်းအမြစ်ကလည်း အလုပ် လုပ်မလုပ်ကို သေချာစွာ စစ်ဆေးရပါမယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ tablet ကို တစ်ခါတစ်ရံ ကွန်ပျူတာ ယူအက်စ်ဘီအပေါက်မှတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ ပါဝါကေဘယ်ကြိုး ကောင်းမကောင်းကိုလည်း စမ်းသပ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
အားသွင်းတဲ့အတုံးက လာလိုက်မလာလိုက် ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်း ပြောင်းလဲတပ်ဆင့်သင့်ပါတယ်။ အားသွင်းတဲ့အတုံးက ပုံမှန် အလုပ် လုပ်ပေမယ့်လည်း tablet က အမှန်တကယ် အားပြည့်ဖို့အတွက် ၅ နာရီကျော်လောက်ထိ ကြာနေတယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ပစ္စည်းဝယ်ခဲ့တယ် ဆိုင်ကိုသွားပြီး လိုအပ်ရင်တော့ အသစ်လဲလှယ်တာတို့တွေ လုပ်သင့်ပါတယ်။
ပြဿနာ ၂ – Tablet ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် နှေးကွေးခြင်း
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တဲ့ package ကို ဝယ်တာတောင်မှ Nexus9အသုံးပြုသူတွေဆီကနေ Multitasking နဲ့ Home ခလုတ်တွေ နှိပ်လိုက်ရင် အရမ်းကို နှေးကွေးကြောင်း ကွန်ပလိန်းတက်ကြပါတယ်။
တစ်ချို့စက်တွေမှာ စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်တဲ့ ပြဿနာဟာ Android 5.0 Lollipop မှာ အဖြစ်များတာတွေ့ရပြီး နောက်ဆုံးဗားရှင်းဖြစ်တဲ့ Android 5.0.1 ကို မြှင့်လိုက်ရင်တော့ စွမ်းဆောင်ရည် တက်ကောင်းတက်နိုင်ပါတယ်။
Factory reset ချကြည့်သင့်ပါတယ်။ (ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကို အောက်မှာပြထားပါတယ်)။ ဘယ် အပလီကေးရှင်းက အဓိက ဟန်းနေတာလဲဆိုတာကို ရှာဖွေကြည့်ရပါမယ်။ Factory reset ချပြီးတဲ့အခါမှာ အပလီကေးရှင်းတွေ ပြန်ပြီးတော့ အင်စတောမလုပ်ခင်မှာ ကိုယ့်ရဲ့စက်အခြေအနေကို ထပ်စမ်းသပ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
ပြဿနာ ၃ – အားသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ ရုတ်တရက် Lock စခရင် loop ပတ်ခြင်း
တစ်ချို့ Nexus9တွေမှာတော့ အားသွင်းကြိုးနဲ့သူတို့ရဲ့ tablet ကိုချိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ အခါမှာ lock စခရင်ဟာ တဖျတ်ဖျတ်ဖြစ်ပြီး ထပ်ခါထပ်ခါ ဖြစ်နေတယ်လို့ ကွန်ပလိန်းတက်ကြပါတယ်။ အဲဒိအချိန်မှာ tablet ကိုထိတွေလိုက်တဲ့အခါမှာ respond မရှိဘဲ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မက်ဆေ့အလတ်လေးတက်လာပြီး လန်ချာဟာ crash ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ပြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံတော့ ဒီပြဿနာဟာ ကိုယ့်ရဲ့ မမ်မိုရီနဲ့ ကိုယ်သွင်းထားတဲ့ အပလီတွေနဲ့ မမျှတဲ့အခါမှာလည်း ဒီလိုမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Google အပလီကို ဖွင့်ပြီးတော့ Menu ထဲက Settings မှာ “OK Google” ဖွင့်ထားလား သွားကြည့်ပြီး “Always On” ဆိုတဲ့ checkbox ကို အမှန်ခြစ် ဖြုတ်ရပါမယ်။
ဒုတိယအနေနဲ့တော့ ကိုယ်သုံးတဲ့ ဘာသာစကားကို တစ်ခြားဟာ ပြောင်းကြည့်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ ဘာသာစကား ပြန်ချိန်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
​ကိုယ့်ရဲ့ Tablet ဟာ up to date ဖြစ်ရဲ့လားဆိုတာကို Setting ထဲက About Tablet – Software Update မှာ သွားပြီးတော့ စစ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
ပြဿနာ ၄ – Wifi က ကော်နက်ရှင် မချိတ်နိုင်တာ
စျေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းတိုင်းမှာတော့ အများစုက တစ်ချို့ Wifi နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး ပြဿနာ အနည်းနဲ့အများတော့ ရှိကြပါတယ်။ Nexus9လည်း အတူတူပဲပေါ့။
ပထမဆုံး ကိုယ့်ရဲ့ router ကို ပိတ်လိုက်ပါ၊ ပြီးရင် Nexus9ကိုလည်း ပါဝါခလုတ်ကို ဖိထားခြင်းအားဖြင့် ပါဝါကို ပိတ်စေပြီး နှစ်ခုစလုံးကို တစ်ပြိုင်းတည်း ပြန်ဖွင့်ကြည့်ပါ။
Wifi Analyzer လို အပလီကေးရှင်းတွေ သုံးပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ကော်နက်ရှင်ချန်နယ် signal အားကို စစ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
ကိုယ်သုံးနေတဲ့ Router ရဲ့ ဗားရှင်းဟာလည်း up to date ဖြစ်ရဲ့လားဆိုတာကို စစ်ဆေးသင့်တယ်။ ဒါမှ ကိုယ်သုံးနေတဲ့ ISP နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Settings – Wifi ထဲဝင်ပြီး ကိုယ်သုံးနေတဲ့ ဝိုင်ဖိုင်နာမည်ကို ရှာပြီး Forget Network လုပ်လိုက်ပါ၊ ပြီးရင် ပြန်ချိတ်ကြည့်ပါ။
2.4 GHz Default ဖြစ်နေတဲ့ အင်တာနက် band frequency ကို strong signal ဖြစ်အောင်5GHz ချိန်းကြည့်ပါ။
ကိုယ်သုံးနေတဲ့ Router မှာ MAC filtering ကို ဖွင့်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင် အဲဒီ Router ရဲ့ MAC list ထဲမှာ ကိုယ်ရဲ့ tablet mac address ပါမပါ စစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ့် Tablet ရဲ့ MAC Address ကို Settings – About Tablet မှာ ဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ပြဿနာ ၅ – အပူလွန်ကဲမှု ပြဿနာ
အသုံးပြုသူအများစုဟာ Nexus9ဟာ ရံဖန်ရံခါမှာ အပူလွန်ကဲမှု ဖြစ်တယ်လို့ ကွန်ပလိန်းတက်ကြပါတယ်။ အဲဒိအပူလွန်ကဲမှုဟာ ပရောက်စက်ဆာကို အပူလွန်ကဲစေတဲ့ ဂိမ်းလိုမျိုး အပလီတွေ မဖွင့်ပဲနဲ့ သာမန် ဘရောက်ဇင်းလုပ်ရင်တောင်မှ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။
အန်နီမေးရှင်းတွေ အများစုပါဝင်တဲ့ ဆိုက်ဒ်တွေကို ရှောင်ရှားကြည့်သင့်ပါတယ်။
တစ်ခြား ဘရောက်ဇာတွေဖြစ်တဲ့ Firefox Beta or Chrome တို့ကို စမ်းသပ်ပြီး ပြောင်းလဲသုံးစွဲကြည့်သင့်ပါတယ်။
အပလီတွေကိုလည်း up to date ဖြစ်နေအောင် ထားသင့်ပါတယ်။
Android Lollipop ရဲ့ updates တွေကိုလည်း up to date ဖြစ်အောင်လုပ်သင့်ပါတယ်။
ပြဿနာ ၆ – အပလီတွေ crash ဖြစ်ပြီး ဖွင့်မရခြင်း
တစ်ချို့ Nexus9အသုံးပြုသူတွေမှာ သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အပလီတွေကို အသုံးပြုရာမှာ ဖွင့်ရဖို့အတွက်ကို ခက်ခက်ခဲခဲ ဖွင့်ကြရပြီး၊ တစ်ချို့က crash ခဏခဏဖြစ်ပြီး Home ကို ပြန်ပြန်ရောက်သွားတတ်ပါတယ်။
အပလီတွေဖွင့်တဲ့အခါမှာ အဲဒီ crash ဖြစ်တာဟာ ကိုယ်ဖွင့်နေတဲ့ အပလီမှာပဲ ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီအပလီကို up to date ဖြစ်အောင် လုပ်သင့်ပါတယ်။ ပြီးရင် ကိုယ့်ရဲ့ အပလီက Android Lollipop 5.0 ရဲ့ ဗားရှင်း ကိုက်မကိုက်လည်း စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်၊ ပြီးရင် Settings – Apps ကိုသွားပြီး ကိုယ် crash ဖြစ်နေတဲ့ အပလီကိုရွေးပြီး Clear Cache ကို လုပ်သင့်ပါတယ်။ ပြီးရင် Nexus9ကို restart ချပြီး crash ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင် တစ်ခြား အပလီတွေကို ထပ်စမ်းကြည့်သင့်ပါတယ်။
“Battery Saver” ဖန်ရှင်ကို ပိတ်ထားသင့်ပါတယ်။ အဲဒိ ဖန်ရှင်က ဖုန်းရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပဲ သုံးဖို့အတွက် ကန့်သတ်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။
Nexus9ဟာ ပစ္စည်းအသစ်ဖြစ်တာနဲ့အညီ ကိုယ်သုံးနေတဲ့ Google Profile ဟာလည်း အသစ်ဖြစ်သစ်ပါတယ်။ အပလီအဟောင်းတွေဟာ issuses တွေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ စက်ကို Factory reset ချပြီး အသစ် ပြန်လည်အင်စတော ပြန်လုပ်သင့်ပါတယ်။
ပြဿနာ ၇ – Auto-rotate ဖန်ရှင် အလုပ်မလုပ်
တစ်ချို့အသုံးပြုသူတွေက Auto-rotate ဖန်ရှင်နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး ကွန်ပလိန်းတက်ကြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံကျတော့ ယာယီ အလုပ်ပြန်လုပ်ပြီး အဲဒိဖန်ရှင်ဟာ အလုပ်မလုပ်တာ များပါတယ်တဲ့။
Settings – Accessibility – Display ကို သွားပြီး “Auto-rotate” ဖီးချားကို ပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
Nexus9ကို restart ချကြည့်ပါ။
Auto-rotate ဖန်ရှင်နဲ့ အလုပ်မလုပ်ဘူးလို့ထင်တဲ့ အပလီတွေကို ဖြုတ်ချပြီး ပြန်လည်အင်စတော လုပ်သင့်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမရရင်တော့ Factory reset ချပြီး အပလီတွေကို အင်စတော ပြန်လုပ်သင့်ပါတယ်။
နောက်ဆုံး Nexus9ရဲ့ sensor မှာလည်း ချွတ်ယွင်းချက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ဝယ်ခဲ့တဲ့ store ကို ပြန်သွားပြီး အသစ်တစ်လုံး ပြန်လည် လဲယူသင့်ပါတယ်။
ပြဿနာ ၈ – Near-field ချိတ်ဆက်တဲ့ဖန်ရှင် အလုပ်မလုပ်
Nexus9မှာ ပါဝင်တဲ့ NFC ဖီးချားဟာ ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ ဟာတွေကို ပေးချေဖို့အတွက်နဲ့ ဖိုင်တွေကို ရှဲဖို့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့အသုံးပြုသူတွေက အဲဒိဖီးချားဟာ အလုပ်မလုပ်ဘူးလို့ ကွန်ပလိန်းတက်ကြပါတယ်။
အဖုံးပေါ်ကို ဖြေးညှင်းစွာ ဖိထားပြီး အနောက်အဖုံးဟာ အံဝင်ခွင်ကျမှု ရှိရဲ့လား သေချာစစ်ပါ။ ပြီးရင် Tablet camera ရဲ့ အောက်နားလေးက နေရာလေးကို တွန်းကြည့်ပါ၊ နူးညံ့တဲ့ အရာတစ်ခုကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့် အဲလိုမျိုး မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ အသစ်တစ်လုံး ပြန်လည်လဲယူသင့်ပါတယ်။
Nexus9ကို Factory reset ချနည်း
ပထမဆုံးကိုယ့်ရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဒယ်တာတွေကို backup လုပ်ထားပါ၊ ဘာလို့လည်းဆို​တော့ ရှိသမျှဒယ်တာတွေကို အကုန်ဖျက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Settings – Backup and Reset – Factory data reset – Reset Tablet ကို ရွေးပါ။
သင့်ရဲ့ Password or PIN ကို ရိုက်ပါ။
“Delete Everything ” ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ။
နောက်ဆုံးမှာ စက်က အလိုအလျောက် reboot ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
About Kaung Sint Aung
ခင်ဗျားမှာ ခံယူချက်ဆိုတာ မရှိသေးသရွေ့တော့ ဘယ်အရာကမှ အရေးကြီးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခံယူချက်ဆိုတာရှိနေပြီဆိုရင်တော့ အဲဒိခံယူချက်လောက် ဘယ်ဟာကမှ အရေးမကြီးတော့ပါဘူး။ Nothing really matters unless you haveacode! May be sharing the things what I know to the audiences to be pleased is my code! Sincerely I am notawriter or author, I am learning how to write and sharing or translating what's going on over the world! Sometimes I combined my opinions or thinking to that articles. I'm really welcome of your some advises or opinions as your perspective about my articles, just point me out! It can really drive home to beabetter writer or author to me! Thanks!	View all posts by Kaung Sint Aung →
Newer ၀င်းဒိုးမှာ ဘယ် Appsတွေက အင်တာနက် ချိတ်ဆက်နေသလဲဆိုတာ လေ့လာနည်း
Older အင်တာနက်ကို ဖြတ်တောက်နိုင်တဲ့ နည်း ဆယ်နည်း